ကမာကြည်လမ်းမကြီးနှင့် မြဝတ်ရည်လမ်း လမ်းစုံထောင့်နေရာကောင်း
ပိုင်ဆိုင်မှု အိုင်ဒီ: 2682150
အမှတ်၅၉၊ ကမာကြည်လမ်းမကြီးနှင့် မြဝတ်ရည်လမ်းထောင့်ကွက့် ၊၂၉ရပ်ကွက်၊ VIP-2 လုံးချင်းအိမ်ယာ၊ သုဝဏ္ဍမြို့ဦးစေတီအနီး ။
 ပုဇွန်တောင်ချောင်းနှင့်သုဝဏ္ဍမြို့ ဦးစေတီအားမျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်ကွင်းviewကောင်း
 ၆၀*၆၀ ခြံအကျယ်အပြင် ကျယ်ဝန်းသောကားပါကင်( Estimate ကမာကြည်လမ်းမကြီးဘက်သို့၂၀ပေခန့် နှင့် မြဝတ်ရည်လမ်၁၀ပေခန့်ကျန်ရှိသေးသောအကျယ်အဝန်း )
 တောင်ဒဂုံဘက်မှ ပုဇွန်ချောင်းကိုဖြတ်၍ မြို့ဦးစေတီဝနျးဘေးသို့ ထိချထားသော နောက်၆လခန့် အကြာတွင်ပြီးဆီးတော့မည့် တံတားအသစ်ပေါ် ဆင်းလာလျှင်လှမ်းမြင်ရတော့မည့် VIP2 တွင် လမ်းမတန်း ဖြစ်သည့်အပြင် လမ်းစုံထောင့် ဖြစ်သည့် ရပ်ကွက်ကောင်း နေရာကောင်း
 သာကေတ အဝိုင်းသို့2-3 မိနစ်သာမောင်းချိန်ကြာ
 ဆေးရုံ့ , ကျောင်း , car show room အစရှိသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန်ကောင်းသောနေရာ
*( Not Agent , Direct Seller )
3,600 Sq.M. Land area
ဤပရောဂျက်ကို Laura Zin The information contained in this listing formsaproperty advertisement of which dotproperty.com.mm has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty.com.mm cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.